Mamorona fitaovana anti-viriosy vita an-toerana i Mozambika · Global Voices teny Malagasy
Fandrivotra iray ho an'olona iray tapitrisa ihany no ananan'i Mozambika
Nandika (en) i Ayoola Alabi
Voadika ny 23 Jona 2020 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, English, polski, русский, عربي, Português
Maska vita amin'ny lamba, fitaovam-piarovana azo ampiasaina indray, sy fievohana araka ny nentin-drazana hanesorana ireo soritr'aretina madinika — ireo ny sasantsasany amin'ny vahaolana hitan'ny manampahefana mozambikana tsy manambola sy ny olom-pirenena ao aminy raha mihamiakatra ny isan'ny tratran'ny COVID-19.
Hatramin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra ôrizinaly, 80 ny isan'ny tranga COVID-19 voamarina tao Mozambika, araka ny nolazain'ny minisiteran'ny fahasalamana, ary tsy nisy ny maty. Azo avy amin'ny famindràn'ny fiarahamonina ny 72 amin'izany tranga izany ary 57 no any amin'ny faritany avaratra any Cabo Delgado, foiben'ny valanaretina ao amin'io firenena io. Marary 19 no efa sitrana tamin'izany.
Na izany aza, raha ny fahitana ny rafi-pitsaboana voafetra amin'ny fahafahana manao fitiliana, tsy mitaratra ny zavamisy ireo antontanisa ireo. Fa tamin'ny 4 mey, mbola 2.589 monja ny isan'ny fitiliana vitan'ny Ivotoeram-Pirenena Misahana ny Fahasalamana ao Mozambika ahitana mponina 30 tapitrisa.
Tahaka ireo firenena hafa andalampandrosoana, tsy manana ny fampitaovana ilaina toy ny totoforana (fandrivotra) ny rafi-pitsaboan'i Mozambika — 35 monja ny isan'izany manerana ny firenena iray manontolo.
Na izany aza miezaka ny manampahefana ny hampihemotra ny tendron'ilay aretina, izay tombanan'ny maodely sasany ho tratra any amin'ny fisasahan'ny taona, mandra-pahatonga ny Janoary na Febroary 2021 mba hahafahan'ny servisim-pahasalamana manam-potoana hanangonam-pitaovana sy hanatsarana ny fahatakarany momba ilay aretina.
Mandritra izany fotoana izany, nambaran'ny governemanta ny fotoam-pahamehana ary nanomboka nandray fepetra henjana ry zareo, tahaka ny fandraràna ny môtô taxi izay nanana ny lazany. Na izany aza, taorian'ny hetsi-panoherana mahery setra nanoheran'ny mpitondra taxi izany fepetra izany, nihemotra ny manampahefana ary novahany ny lalàna, mamela ny môtô taxis hiasa fa tsy maintsy manao maska ny mpitondra sy ny entina. Tsy maintsy anaovana ihany koa ny maska rehefa mandeha fitateram-bahoaka.
Saingy raha ny vidin'ny maska enti-mandidy amidy manodidina ny 50 ka hatramin'ny 100 meticais (efa ho iray dôlara amerikana isanisany), dia tsy ho takatry ny ankamaroan'ny Mozambikana mihitsy izany.
Maska namboamboarina avy amin'ny tavoahangy plastika ao Mozambika – Jornal da Noite, April 14.
Na izany aza anefa dia tsy nametraka drafitra entina hanampiana io vokatra vita an-trano io ny manampahefana ary nampanantena ny hizara maska miisa 12.000 monja – izany hoe maska iray monja isaky ny olona 2.500.
Notsikerain'ny Foiben'ny Demaokrasia sy ny Fampandrosoana, fikambanam-pampandrosoana iray ao an-toerana, izany fomba fiasan'ny governemanta izany:
Miharihary indray fa mametraka fepetram-pandraràna tsy mihevitra izay fampitaovana ilaina hampahombiazana izany eny anivon'ny olompirenena ny governemanta.
Mandritra izany fotoana izany ny Centro de Integridade Pública (CIP), FTMF iray ao an-toerana, nanomboka nizara maska ho an'ireo mpiasan'ny tsena ao an-toerana, ho fanampin'ny fampahafantarana ny mahazavadehibe azy ireny.
Araka ny nolazain'ny fikambanam-pampitam-baovao miteny paortiogey iray Agência Lusa, vita amin'ny capulana ny maskan'ny CIP ary nozairina niaraka tamin'ny lamba vita amin'ny landy izay manana fahazakana tsara hanivana kasingan-drivotra.
Saripikan'ny maska vita amin'ny capulana (fitafy ao an-toerana) ao Mozambika. Saripikan'ny Centro de Integridade Pública, nahazoana alalana.
Entana efa tsy ilaina lasa fitaovana enti-miaro ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana
Tratran'ny tsy fahampian'ny fitaovam-piarovana ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana. Hialana amin'izany dia nisy vondrona dokotera avy amin'ireo hopitaly tsara indrindra ao amin'ny firenena, ny Hospital Central de Maputo, no niezaka nanamboatra raoby, satroka, maska ary ireo fono fiarovantena hafa ho an'ny kiraro sy ny baoty.
Araka ny nolazain'ny hopitaly azo natao ny famokarana ity fitaovana ity noho ny firotsahana an-tsehatra ny ekipa niaraka tamin'ny sehatry ny fanjairana goavana irery ihany.
Manantena izahay fa hampihena betsaka amin'ny mety hisian'ny famindrana aretina izay mampihanjahanja ny mpiasan'ny fahasalamana ity fitaovam-piarovana ho an'olo-tokana ity.
Azo esorin-doto sy mikrôba ny fitaovana ka azo ampiasaina mihoatra ny indray mandeha sady mora vidy raha vokarina.
Mievoka ho fampihenana ny soritr'aretina COVID-19
Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny fahitalavitra Mozambikana, nandrisika ny hanaovana evoka ny minisitra ny fahasalamana Armindo Tiago ho fanesorana ny soritr'aretina madinika COVID-19 ao anatin'izao fotoana izao.
Fomba mahazatra any Mozambika ny mievoka ary ahitana fifohana etona an'orona avy amin'ny raokandro na ravinkazo — matetika ravin-kininina na ravin-goavy — ao anaty rano mangotraka. Afangaro ao anaty koveta ny ravina ary misarona ao anaty bodofotsy mandritra minitra vitsivitsy sady mifoka lalina an'orona.
Araka ny asehon'ny gazety Verdade, efa vonona ho amidy any amin'ireo tanàna isankarazany manerana ny firenena amin'ny vidiny 50 meticais (latsaka iray dôlara amerikana) ireo kasinga entina manao evoka voalaza etsy ambony :
#covid19 fandraisana an-tanana ao amin'ny foibe ielezan'ny #coronavirusMOZ mitentina 50 meticais ny ravina kininina tsirairay #Maputo #Moçambique pic.twitter.com/bfliNZhKV8